हाँस्दा र चुइगम चपाउँदा पनि घट्छ तौल, यी ५ ट्रिक्स अपनाउनुस् – Jagaran Nepal
काठमाडौं । जिम जाने चाहना सबैलाई नहुन सक्छ तर तौल घटाउने चाहना भने सबैलाई हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त पानीजसरी पैसा बगाउँदा पनि तौल घट्दैन । तौल घटाउनको लागि आफ्नो शरीरले कति क्यालोरी पाइरहेको छ र कति खपत भइरहेको छ भन्नेकुरा जान्नु एकदमै जरुरी हुन्छ ।
अब कुरा आउँछ मोटोपन कम गर्नको लागि क्यालोरी कसरी बर्न गर्ने ? खासगरी मानिसहरु भारी तौल उठाउनुका साथै डाइटको माध्यमबाट तौल कन्ट्रोल गर्छन् । तर पैसा खर्च नगरी पनि तौल घटाउन सकिन्छ ।
१‍. तौल घटाउनको लागि जाडो मौसमको फाइदा पनि उठाउन सकिन्छ । तापक्रम कम हुनुको कारणले शरीरको मेटाबोलिज्म यस मौसममा बढी सक्रिय हुने डाक्टरहरुको भनाइ छ । १९ डिग्रीभन्दा कम तापक्रम भएको कोठामा सुत्नाले ७ प्रतिशत भन्दा बढी क्यालोरी बर्न हुन्छ ।
२. विशेषज्ञहरुका अनुसार मोटोपन कम गर्नको लागि चिसो पानी पनि एकदमै उपयोगी हुन्छ । जब शरीरमा चिसो पानी राखिन्छ तब उसले त्यो पानी तताउन थाल्छ, जसको लागि हाम्रो शरीरको क्यालोरी खर्च हुन्छ । शरीरमा तापक्रम सामान्य र मेटाबोलिज्म ठिक भएको कारण मानिसको तौल तीब्ररुपमा घट्छ ।
३. हाँसोलाई सैयौँ दुखको एउटै औषधि भन्ने गरिन्छ । हास्नाले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलित हुन्छ । एक अध्ययनका अनुसार हास्नाले मेटाबोलिज्मको दर १० देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्छ, जसले शरीरमा क्यालोरी एकदमै छिटो बर्न हुन्छ र तौल घट्छ ।
४. रक्तदान गनाले मानिसको शरीरको क्यालोरी भारी मात्रा बाहिर आउँछ । रक्तदानपछि प्रोटिन, रातो रक्तकोषहरु र अन्य तत्वहरु फेरि उत्पन्न हुनको लागि शरीरको एकदमै धेरै उर्जा खपत हुने गर्छ । जसकारण पनि शरीरको तौल घट्छ । रक्तदानपछि मानिसको शरीरमा कमजोरी हुने गरेको कुरा तपाईंले पनि महसुस गर्नुभएको होला । यस्तो अवस्थामा शरीरको एकदमै धेरै क्यालोरी बर्न हुनेगर्छ ।
५. यदि तपाईं बिना कुनै परिश्रम तौल घटाउन चाहानुहुन्छ भने चुईगम खान शुरु गर्नुहोस् । दिनमा २० मिनेट चुइगम खानाले तपाईंको तौल घट्न मद्दत गर्छ । चुइगम चपाउँदा मेटाबोलिज्म बढ्छ र शरीरम क्यालोरी बर्न हुन्छ । यद्यपि चुइगम चपाउनुभन्दा अघि त्यो सुगरफ्रि हुनु आवश्यक छ ।